Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-arụ ọrụ na Dubai site na nchịkọta & Nduzi na UAE】
Ọrụ Center Center na Dubai
Ihe niile Banyere Nbudata Business na UAE
Kedu ka esi nweta ọrụ ntụrụndụ na Dubai?
Call center jobs in Dubai na United Arab Emirates bụ otu n'ime ọrụ kachasị ukwuu. Nwere ike ịchọta ezigbo ihe maka gị ka ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ oku. N'ezie ụdị ọrụ a adịghị mfe iji jikwaa ma n’ezie, ọ na-ewe ọtụtụ mbọ n’aka ndị ọrụ ha. Mana n'eziokwu, ụdị ọrụ a nwere ike ịrụ abụghị naanị na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi nwere ike ọ bụghị n'eziokwu ọ bụla n'ụwa.
Nzukọ anyị na-ede edemede a naanị igosi gị ụzọ isi nweta ụdị ọrụ a. Anyị na-ekwukarị na-etinye ezi ihe niile maka ihe bara uru ndu maka ndi oru Poland na ndị mmadụ bi na United Arab Arab Emirates.
Kpọtụrụ Ọrụ Ụlọ Ọrụ na Dubai?
N’okpuru, igha enweta n ’ụlọ ọrụ oku ebe a ị nwere ike itinye akwụkwọ wee nweta ọrụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, n'eziokwu, ha ga-esi ike bulite CV mana ha ga-etinye ya nhọrọ ịkpọtụrụ ha. Yabụ na ị ga - aga n'ụzọ dị mma ịlaghachi E nwere ọtụtụ ọsọ karịa usoro ọkọlọtọ. Ọrụ ụlọ ọrụ oku na Dubai bụ 100% bara uru ịga UAE.
Ọrụ Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-eweta na Dubai
Imirikiti ụlọ ọrụ ọkpụkpọ oku bụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na azụ azụ. Ihe karịrị 80% n’ime ha na-agba ọsọ dị ka ụlọ ọrụ ndị ahịa mmekọrịta dị elu.
Ụbọchị ndị a ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aghọ ndị mba ọzọ na ejiri atụmatụ dị ka ijikọ igwe na kọmputa telefon. Na ahia mgbasa ozi na mgbasa ozi na-eme ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi metụtara ya.
Nke a na-enye ohere ka ụlọ ọrụ na-etinye data data ndị ahịa n'ime usoro njikwa mmekọrịta onye ahịa ha. Karịsịa ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ United Arab Emirates. Ha bụ ịhụnanya ịzụlite oru ngo dabere na ntọala yana ịmalite ọrụ na Dubai. Na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-achọ imezu nke ahụ n'ime obere oge.
N’aka nke ọzọ, a na-eme ka ọrụ ndị ọrụ na - eme n'etiti ndị ahịa bata na ogo kachasị elu. Companieslọ ọrụ dị ka ụlọ ọrụ na-akpọ ndị ahịa oyi na-akpọ ndị ahịa na-enwe ike ịnapụta ndị ahịa ha ọtụtụ nhọrọ. Ọtụtụ e mere iji zute ndị Dhalọ ọrụ Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai chọrọ nke achụmnta ego nke ụbọchị a.
Oku na-agwụ ike na Ụlọ Ọrụ Nlekọta Ọrụ tinyere ọrụ ọrụ ndị na-esonụ:
Ọrụ dị na Inbound helpdesk ihe ngwọta maka ndị ahịa mba ọzọ.
Na-arụ ọrụ dị ka onye na-elekọta gị ma na-aza ọrụ ekwentị na email.
Na-enye ọrụ gị dịka onye ahịa azụmahịa dị omimi.
Ndinweta, dochie Ekwentị na nhazi.
Nke kachasị mkpa na Dubai na Abu Dhabi dịka onye isi na-elekọta ndị isi na ndị na-enyere ndị isi aka.
Na-arụ ọrụ dị ka inbound and inbound engineering counseling.
Ihe gbasara nchekwa data na ọkachamara IT.
Anyị na azịza mmekọrịta ndị ahịa zuru oke, azụmaahịa nwere ike tụọ arụmọrụ nke usoro ha, nye ndị ahịa aka, na-aga, ma na-achịkọta data maka ndozi arụmọrụ, na-enweghị ekenyeghị akụrụngwa ndị eji arụ ọrụ.
TeleServices.ae ụlọ ọrụ na Dubai
Companylọ ọrụ mbụ na mbubreyo anyị bụ na allalọ Ọrụ Ọrụ Dallas na Dubai. Nzukọ a Otu n'ime ndị ama-ama ama na nke ndị Arab maara na Dubai City.
Mgbe gị na ya na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai. Ọha ọ dị mkpa ga - enyere gị aka ịkwalite ọsọsọ. Yabụ, anyị na-akwadosi gị ike ka ị bulite mmalite gị na ụlọ ọrụ a. Ma nye ha ohere ka gbara gị ajụjụ ọnụ na Dubai ma ọ bụ ebe ọ bụla na mpaghara Ọwara.
Ha anaghị aga isi mgbe ọ bụla na ngalaba ụgbọelu na webụsaịtị ha. Ma gịnị ka ị pụrụ ime n'ezie? inweta ọrụ n’ebe a bụ ịkpọtụrụ ha n’onwe gị. Ziga ha ozi ngwa ngwa na ngalaba kọntaktị. Nke a bụ otu ị ga - esi nweta ọrụ site n'izigara ha nkọwa zuru ezu na ụlọ ọrụ ahụ. Na Dubai nke oge ụfọdụ bara uru inye ihe. Imirikiti nnukwu ụlọ ọrụ na-akpọghachi ndị ha na-eziga res resị ozugbo na ngalaba kọntaktị.
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Na-akpọtụrụ
Ọ bụ nzukọ nke abụọ nha dika Google. Companylọ ọrụ a na-enyekwa ezigbo ọrụ yana ezigbo ọrụ maka ndị ahịa ya na Dubai. Agbanyeghị, ụlọ ọrụ a anaghị etinye isi na ngalaba ọrụ na weebụsaịtị ha. Mana dika iji gị, ị nwere ike izipu ha ngwa ngwa banyere ịmalitegharị na ahụmịhe gị.
Yabụ ị ga-enwe ezigbo mma ohere iji nweta ha ọrụ na ohere ị ga-eji na-agwa ndị mmadụ okwu ka ọ kacha nwee akara dị ka ụlọ ọrụ a.
Call center Jobs in Dubai bu ezigbo uzo iji kpata ego!
Nri rie gi nweela ahụmịhe na telophase ma ọ bụ ọbụna ọrụ ịkpọ oku oyi. O doro anya na ekwesiri inye gi okuazu ma n’ezie uzo a o gha enyere gi aka inweta oru n’etiti anyi na Dubai.
City Ọrụ Consultancy
Kpọọ Companylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nchedo Ọrụ enyela ego na United Arab Emirates na amalite oru na 2006 dị ka ụlọ ọrụ na-eduga. Companylọ ọrụ a bụ otu n'ime ọrụ kachasị ukwuu nke ụlọ ọrụ ịkpọ oku oyi na Dubai.
Agbanyeghị ụlọ ọrụ a enyerela aka inweta ọrụ ha ihu nke weebụsaịtị dị na akuku elu maka ndị na-achọ ọrụ. Na-ekwu maka ụlọ ọrụ a n'ozuzu ya, ọ dabere na nnukwu ebe ọrụ na Dubai. Ha na-enyocha nyocha 20 karịa nke ezuru. Iji maa atụ, ntụle-kpakpando anọ ma ị nwere ike ịkpọ ha iziga CV gị. Na oge obula, inwere ike ịkpọtụrụ ha ka mmadụ nweta ọrụ.
Uzo ndi otu ntaneti di iche iche
Companylọ ọrụ a dị arọ karịa ndị ọrụ 500 ọtụtụ ebe ọrụ gbasara ihe ruru narị narị n'ime ha na ị nwere ike ịnweta ọrụ na ha. N'elu nke a, nzukọ a na-agba ọsọ ihe karịrị mmadụ anọ mba na Middle East na-enyocha Dubai Saudi Arabia na Qatar. Meekwa ụlọ ọrụ a ga-abawanye edemede na ebe ọ bụla n'ụwa.
Yabụ lee anya nyocha ndị dị n'ịntanetị na elu nke onye njikwa ahụ kwuru ka ịlele ọrụ ha. Gbalịa kpọtụrụ ha ngalaba nke ihe nchịkwa mmadụ na usoro ịmalitegharị gị. Definitely ga-enwerịrị ike inweta ọrụ na-adọrọ mmasị. Ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ị ga-eme kọwaara gị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na Dubai.
Emirates DOZ Kpọtụrụ Center
Emirates bụ ihe ọzọ ezigbo ụlọ ọrụ ga na-arụ ọrụ na mpaghara Gulf. Ha nwere ọrụ ụlọ ọrụ oku na Dubai United Arab Emirates. Ị kwesịrị hoo haa lelee websaịtị ha.
Companylọ ọrụ a ga - anọ na njedebe nke ndepụta anyị n'ihi inweta ha ọrụ were were oge. Companylọ ọrụ Emirates na-arụ ọrụ na-ewe ndị ọrụ ego oge ụfọdụ, mana n'ọtụtụ ebe, Ikwesiri inwe visa n’aka gi ka ha na ha nwee oru.
Nke a bụ ihe mere Citylọ ọrụ obodo Dubai na-enye ụlọ ọrụ Emirates ka ndị ahịa anyị nọ na UAE. Companylọ ọrụ a ga - enyere gị aka iji nweta ihe omuma banyere ọrụ oku a na Dubai na United Arab Emirates.
Raya Kpọtụrụ Center
Ozi nyocha: cv@rayacc.com
Otu ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị 3 alaka ụwa dum. Ha na-enwe ọfịs na Warsaw - Poland, Dubai, UAE na Cairo, Egypt.
Ụlọ ọrụ a otu n'ime nnukwu ụlọ ọrụ kachasị na Middle East Market. Ma rụọ ọrụ naanị ọkwa kachasị elu. Ikwesiri ileba anya na webụsaịtị ha ma tinye CV gị emelitere ma ọ bụ nye ha ihe nlele banyere ahụmịhe gị ma chere maka ime anwansi.
Dị ka anyị kwuru na ọ bara uru mgbe ụfọdụ ịbanye na dobe ahụmịhe TV gị ụlọ ọrụ ahụ nwere ike inwe n'ihi na ọtụtụ ụlọ ọrụ na anyị karịrị otu narị mmadụ nọ n'ubi ha. Yabụ ị kwesịrị ịkwali ngwa ịnyịnya ibu gị ma nwaa iji nweta ọtụtụ ozi ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ire cryptocurrency.
Ụlọ Ọrụ Ụlọ Ọrụ Ingres
Ọ bụghị òtù a ma ama na mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ọ bụghịdị ewu ewu na Google ezigbo ndị ọrụ. Companylọ ọrụ a bụ ọgbakọ na - eto eto, ma ị ga - achọpụta na ị bụ ezigbo mmadụ maka ụlọ ọrụ a ma ọ bụrụ nwee ahụmịhe na ngalaba ahịa.
Biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ a udiozi ma nwaa ihu nzuzu na CV gi. N’ezie, ị kwesịrị ijikwa onwe gị na ozi ndị ọzọ gbasara Njikwa n’ụlọ ọrụ a ị nwere ike ịhụ ka ha ejikọta ya ma ọ bụ na Facebook ejikọta ya ma ọ bụ na Facebook. Gbalịa kpoo ọkụ ozugbo n’ebe ahụ ngalaba ọrụ nchịkwa mmadụ ma nye ọrụ gị n’ebe ha nọ, enwere ike inyere gị aka inweta ọrụ ọhụrụ na Abu Dhabi ma ọ bụ Dubai.
Ziwo dị na-enye ha oku
Companylọ ọrụ Ziwo na-arụ ọrụ n'ọtụtụ mba Europe, Middle East na Eshia. N’ezie, otu n’ime ụlọ ọrụ France na UAE na-arụ ọrụ dị ka onye isi njikwa. Ebe ị nwere ike ịmalite emplo oru ma burukwa onye ihe na agara na ahịa na ọnọdụ ịkpọ oku ọnọdụ gburugburu.
N’ikwu eziokwu, ị kwesịrị ilebara nzukọ a anya otu ụlọ ọrụ kachasị elu iji nweta ndị ọrụ ha. Companylọ ọrụ a na-arụ ọrụ puku ndị ọrụ n'ụwa niile na oge ha na-achọ ya na ahịa onye isi.
Yabụ ị ga-atụle ngwa gị ịmalitegharịa ya na ụdị ngwa mkpali emelitere gị ma ọ bụ naanị kpọọ ha oku maka na ha na-arụ ọrụ na Dubai ugbua.
Nzukọ a dị na ndepụta anyị otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ. Ha na-ewere ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ yana ndị isi na ndị isi ọrụ. Yabụ na ị bụ onye isi nwere ike nweta ọrụ ahụ ọmarịcha ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike iwelie ọrụ mmepe gị rue ọkwa Hyatt International.
Ma dika nwa akwukwo, I nwekwara ike inye ha oku nihi na ha di na-achọ ụmụ akwụkwọ na ndị mmadụ enweghị ahụmịhe. Ha ga - azụ gị ma nyere gị aka ị bụrụ ezigbo mmadụ ma ị ga - akpọku ndị ahịa na - akpọ ha ma ọ bụrụkwa will ga - enwe ohere iji mee ka uru gị bara n’etiti ụlọ ọrụ.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọnụ Ọgụgụ
Ohere na enweghi ngwụcha ụlọ ọrụ a bụ mba ofesi nzukọ maka ohere nchịkwa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-enwe ahụmịhe nke afọ n'azụ azụ gị. Ga-enweta ihe site na ụlọ ọrụ a. Ha anaghị enweta ọrụ na United Arab Emirates ugbu a. Ma, ha dị ka ụlọ ọrụ mba ofesi. Yabụ na ọ ga-abara ya uru na usoro nke mba ofesi arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ụlọ ọrụ ịhọrọ maa nzukọ a ọ ga - abụ otu n'ime mmegharị kachasị na ndụ gị. Yabụ lee anya na ebe nrụọrụ weebụ. Tinye na CV emelitere gị.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na emelite emelitere gị ọ bụ na ọkwa njikwa ezigara ha emelitere ịmalite gị. Soro nzukọ dị iche iche dị elu na-arụ ọrụ dị elu.
N'ihi na ụlọ ọrụ a bara uru ịga na ha Ndị isi na-ahụ maka ọrụ na-enye ileba anya na Dubai. Concentrix na-arụ ọrụ na Europe Asia na United States.
Ụlọ ọrụ na-akpọ oku na ụlọ ọrụ
Ezigbo ụlọ ọrụ ịrụ ọrụ n’ime Arab Arab. N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ bụrụ na ị na-achọ ịrụ ọrụ maka ụlọ ọrụ dị na Dubai. Tù a yiri ezigbo amamihe maka inweta ọrụ. Na listi anyị nke ahụ bụ otu narị ụlọ ọrụ dị iche iche. Mana ụlọ ọrụ a bụ otu narị pasent na Dubai ọ ga -adịrịrị gị mfe ịbanye n’ọfịs ma kpọtụrụ onye na-ahụ maka nchịkwa mmadụ si India n'ọfịs ha dị na Dubai.
Going ga-enweta ọrụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Ha na-ewere ọrụ ọbụna na ahụmịhe ntọala ma ọ bụ Inwere ike inwe onye nlekọta ma ọ bụ ọrụ nlekọta ọrụ agadi. Anyị kpebiri itinye ụlọ ọrụ a dịka ezigbo ụlọ ọrụ iji rụọ ọrụ na gburugburu ebe a na-akpọ oku.
Citylọ ọrụ obodo Dubai na-eme nyocha mgbe niile. Anyị nwere ike ikwu na ụlọ ọrụ a dịkwa ọmarịcha ebe na Dubai ma ọ bụ ọbụna Abu Dhabi ọ bụrụ na ha ga-enwe ohere itinye gị otu obodo kachasi nma jikọrọ mba Arab Emirates.
Anyị nwere olile anya ịhụ CV gị. Ma n’ezie ị nwere ike nweta ihe ndị nwere mmasị si na nzukọ ndị otu Dubai.
Fujusoft na Dubai
Otu nnukwu ụlọ ọrụ na United Arab Emirates. Companylọ ọrụ a bụ na-ebu ọ bụghị naanị na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Ha na-eto ma na-ebute isi ụlọ ọrụ dị na India na ọfịs telecom n'ọtụtụ ebe na Dubai.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ijikwa onwe gị ụzọ kacha mma ị ga-esi nweta ọrụ. Lọ ọrụ a ga - enyere gị aka inweta ihe ịga nke ọma na ndụ gị. Naanị n'ihi na ha na-enwe nyocha nke 5 Stars na maapụ Google. Nke ahụ na-enyekwa ha ohere dị ịtụnanya na ụzọ ọkachamara maka ndị ahịa na ndị ọrụ.
Yabụ dị ka ọrụ na-achọ ọrụ, ị kwesịrị ịgbalị inweta ụlọ ọrụ a. Ma ọ bụ opekata mpe ị zitere CV gị emelitere na weebụsaịtị ha. Naanị chere ruo n'oge ahụ ịnata ọrụ dị iche iche.
Ụlọ Ọrụ Ejadah
Companylọ ọrụ azụmaahịa ọcha Emirate. Nzukọ a na-agba ọtụtụ ime obodo na nnukwu obodo dị na United Arab Emirates. Ọzọkwa, ijikwa ihe karịrị 116m sqft nke mmepe na UAE. Organizationlọ ọrụ a arụ ọrụ site na otutu ọgbakọ na obodo arụ ọrụ na nnukwu mpaghara.
Organizationtù nwere ọfịs abụọ. Nke mbụ ọfịs dị na Dubai na nke abụọ dị na Abu Dhabi. Smartzọ amamịghe ọ ga - abụ ịbanye na nye ha ịmalitegharịa gị. Site na ndiobi ị ga-enwe ọrụ dị iche iche na-atọ ụtọ ma ọ bụ, opekata mpe, ị ga-enwe ihe ọmụma miri emi gbasara ohere ha.
Echiche ozo nwere uche ga-abụ ịkpọ ha oku. Dị ka ha nke di na United Arab Emirates ezigbo ohere iji ya na ndị na - anọchi anya ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịgwa ndị ọzọ okwu. Na ikwenye n’onyinye gha enye gi oru ka ọ ga - enye gị ohere nke 50% maka inweta ọrụ ọhụụ sitere na ụlọ ọrụ dịka nke ahụ.
Ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na-ahụ maka amamihe
Companylọ ọrụ a agbasiwo mbọ ike na mbido. Ma ugbu a, ha bụ ezigbo ụlọ ọrụ. Vingchekwa puku ndị ahịa kwa izu. Solutions na-enye ihe ngwọta maka nchebe data na ọrụ mmepe teknụzụ mba ụwa.
Companylọ ọrụ ahụ bụ uru 100% maka itinye ya na nkọwa ọrụ gị. Ikwesiri ileba anya websaịtị ha. Ma lelee ngalaba kọntaktị ha ma zigara ha CV ma ọ bụ kpọọ asap na kpoo ekwentị.
Nanị ngwa ngwa ị nwere ike itinye akwụkwọ maka ụlọ ọrụ a n'ihi na ịchọ ka ị rụọ ọrụ na ngalaba Calling Center na-ewe oge. Ikwesiri inwe ezigbo asụsụ na ikwesiri ima otu esi ere ahia gi na ahia gi nye ndi n’enye gi ahia.
Biko tinye n'uche na nzukọ dị na ọkwa a dịka ụlọ ọrụ mba ụwa a. Ga enweta ezigbo ezigbo uru ị ga - enweta ọtụtụ ihe na Dubai. Companylọ ọrụ a nwere ọdịnala Arabic n'ezie. Kedu nke mara ezigbo echiche ịmalite iso ndị Arab na-arụ ọrụ. Will ga enweta echiche banyere ọdịbendị na Middle East
RTA Oku oku
Rlọ ọrụ RTA dị na Dubai ọ nwere ebe ụlọ ọrụ nwere. Companylọ ọrụ a na-akpọkwa ndị isi ọrụ na-akpọkwa ndị njikwa etiti dị ka ndị ọrụ ọhụrụ na ngalaba ọzụzụ.
Transportlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Roadgbọ okporo ụzọ na Dubai nwere ọtụtụ ndị ọrụ. Yabụ, ịchọta ọrụ n'obere oku nwere ike ịdị mma maka ndị si mba ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-achọ ọrụ na UAE nwere ike ịdebanye aha na Portal ha wee họrọ nhọrọ maka ngalaba ọrụ ndị ahịa.
Kpọtụrụ oku oku
Ezigbo Mpụga ụlọ ọrụ ebe ị ga-enweta ọrụ. Ikwesiri ileba anya na weebụsaịtị ha na ihe omuma ha.
Companylọ ọrụ a na - enyere ụlọ ọrụ ndị ọzọ aka na nnata ma meziwanye mmekọrịta ndị ahịa. Ha na - enye nkwado email ekwentị na ọbụna nkwado nkata weebụ. Ha bụ n'ezie ezigbo ụlọ ọrụ zuru oke. O yikwa ka ọrụ ọ ga - aga na - aga igbe igbe email gị ka ị ga - akpọ ha ma ọ bụ juo ha maka ọrụ dịịrị gị.
Atụla ụjọ banyere weebụsaịtị ha. Ha dị ka ụlọ ọrụ dị nfe mana n'eziokwu, ha dị adị na-enweta nkwado buru ibu na ezigbo ọrụ. Yabụ na-arụ ọrụ na nzukọ a, ọ dịka ezigbo ego itinye ego na oge gị na mmepe ndụ gị.
Slọ ọrụ mba SOS mba abụghị ụdị ụlọ ọrụ oku na-ahụ maka ọgbakọ. Agbanyeghị, ha na enwe ngalaba na-akpọ oku nke aka ha. You ga-ezighaa ịmalitegharị gị ebe ahụ ma chere n ’ime anwansi. N'ihi na ụlọ ọrụ a na-ezochi ụwa niile na puku kwuru puku ọrụ niile na-enye gburugburu ụwa.
Yabụ na ọ bara uru inye ha ohere ma denye aha CV gị na weebụsaịtị. N'ihi na ha na-arụ ọrụ na ọbụna na China Europe na maka mmepe mba ọrụ n'ụwa niile. Lọ ọrụ a nwere ọtụtụ ihe metụtara ebe a na-akpọ ụlọ ọrụ mkpuchi. Ma ọ bụrụ na ị na-enwe ezigbo ahụmịhe n'ịre ndị mmadụ ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ net nke ụlọ ọrụ a ga - enyere gị aka mezuo mmepe gị n’ọdịnihu ọ bụghị naanị na Dubai.
Verylọ ọrụ ọkachamara na usoro azụmahịa. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo ụlọ ọrụ azụmaahịa. Seemstù a yiri ezigbo ụlọ ọrụ. Can nwere ike ịgwa ndị ọzọ nwere mmasị na-achọ ọrụ na Dubai. Nwere ike inwe ezigbo ụlọ ọrụ a n'ihi na ha na-enye otutu otutu ohere di na Mena Region.
Agbanyeghị, nzukọ a ọ bụ akụkụ nke nnukwu Robes nke ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ezie ma na-enweta ọrụ nwere mmasị ọ bụghị na United Arab Emirates kamakwa na mpaghara Middle East dum.
Ụlọ Du-Mobile na Dubai
Ulo oru a dikwa ọmarịcha ebe ị nwere ike inweta ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ha na-esetịpụ atụmatụ Mobile na ngwugwu TV, yana ọrụ mgbasa ozi maka ndi ahia ha na Dubai na Abu Dhabi. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ akwugo ugwo ma ọ bụ postpaịpị. Ikwesiri ileba anya na oru ha na ngwa nke websaịtị web.
Du mobile bụ ụlọ ọrụ ekwentị ekwentị maara nke ọma na Dubai na Abu Dhabi. Ma, ha na-ewukwa akụkụ nke azụmahịa ha n’obodo ole na ole ndi ozo dika Qatar na Saudi Arabia.
Ọ dị ezigbo mma ụlọ ọrụ ebe ị ga - ekwurita ụka. Companylọ ọrụ na-arụ ọrụ n'ezie na ụlọ ọrụ ndị kacha elu, dịka ọmụmaatụ, Mc Donald, Ikea, Vodafone na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ Dubai City na-adụ ọdụ ike expats na ndị ọrụ obodo itinye nzukọ a n'ọrụ. Firmlọ ọrụ a nwere ọtụtụ ọrụ. N'ezie, ịnwere ike rụọ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka ọrụ ịkpọ oku na dịka onye na-ahụ maka ọrụ ndị ahịa.
Ọrụ ọrụ oku na Eros Group. Ndi otu ahu di nma bidoro na 1967 ma Eros Group E guzobere ya na ebe ahia ahia Deira dị na Dubai. Ọzọkwa, kemgbe oge ahụ ụlọ ọrụ ahụ abanyela ọkwa ọzọ. Buru nnukwu ụlọ ọrụ ebe ị nwere ike ịchọta ọrụ. Ọzọkwa, Eros Group bụ onye nkesa ama ama ama na-ere ahịa elektrọnikụ ahịa na UAE na GCC.
Otu nzukọ Dubai a dị ịtụnanya jisiri ike ịrụ ọrụ n'ime ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ n'otu akara. Companylọ ọrụ a bara ezigbo uru na oge gị na ahịa Dubai na Abu Dhabi ha etolitela na oge. Companylọ ọrụ ahụ kwukwara ọtụtụ ụdị, ngwaahịa na ọrụ dị ịtụnanya na azụmaahịa ha. Ọzọkwa, ndị otu Eros na-abịa n’ọrụ ya ugbu a na UAE.
HSBC ya nwekwara Ogwe oku
Ụlọ ọrụ HSBC a ma ama bụkwa ezigbo nzukọ. Otú ọ dị, ha abụghị ebe a na-akpọ oku, ha bụ azụmahịa na ịzụ ahịa ego.
Usoro ụlọ akụ HSBC bụ otu n'ime ụlọ ọrụ akụ na-akwadoro ego na ụwa. Companylọ ọrụ ahụ jisiri ike na -eme ihe karịrị ndị ahịa nde 39 obughi na Dubai ma obu Abu Dhabi. Banklọ akụ HSBC na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-arụ ọrụ site na azụmaahịa anọ zuru ụwa ọnụ na mpaghara GCC. Iji maa atụ, ụlọ ọrụ na-ere ahịa azụmaahịa na azụmahịa. Ọzọkwa, nchịkwa akụ na ụba maka ndị ahịa pụrụ iche na Dubai.
HSBC na-elekwasị anya na ụlọ akụ azụmahịa na UAE. Nnukwu ụlọ ọrụ a na-agba ọsọ maka Global Banking na Ahịa GCC. Agbanyeghị, ndị njikwa ahụ ruru eru ikwu okwu na ọrụ maka Global Private Banking. Ngwunye HSBC na-ekpuchi mba na ókèala 66 na Europe, Eshia, Middle East na Africa, North America na Latin America.
Kedu onye na-arụ ọrụ na ngalaba ntụrụndụ oku?
Ndị India na-arụ ọrụ na Ụlọ Ọrụ Na-akpọ
Otu ọfụma, ndị otu nọ na ngalaba ụlọ ọrụ na-akpọ oku bụ ndị India. Ndi otu a bu obodo buru ibu na United Arab Emirates. Ya mere n'ozuzu na-ekwu okwu ọ bụrụ n’ị na-esi India abịa Dubai. Ọrụ ụlọ ọrụ oku na-arụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị ahịa bụ ụzọ kachasị ọsọ nke ịchọta ọrụ na Dubai na Abu Dhabi.
Dubai bụ ebe dị ịtụnanya nye ndị mmadụ gburugburu ụwa. Ndị India bụ nara oru na Dubai. Ha anaghị akpata nnukwu ego. Agbanyeghị, ọ bụrụ n’inweta ọrụ dị mma ma bido inyere ndị mmadụ aka. Ọzọkwa, na-adụ ndị mmadụ ọdụ ma na-akpali ha ndị mmadụ maka inweta ngwaahịa ha chọrọ.
Youkwesịrị ịga ije n'etiti Ụmụ India na Dubai. Naanị n'ihi na ha bụ ndị mmadụ na-eme ụdị jumps a na-enye. Ma na ị ga-enwe ahụmịhe. Definitely ghọtara nke ọma ntakịrị ihe gbasara Dubai na Abu Dhabi oyi akpọ Center ahịa. Na n'ezie ọ bụ nnukwu ebe maka expats.
Ị nwere ike ịmalite yana mmalite ọrụ na ọkwa nlekọta na United Arab Emirates.
Ndị Filipinos na-akpọ oku
Ìgwè nke abụọ nke ndị ọrụ na ngalaba ọrụ akpọtụrụ nọ na Filipaị. Na-ekwukarị, inwe ezigbo asusu bekee. Dika ha mutara otutu aka oru ha n’ulo akwukwo ha na asusu Bekee a gha aghota ya nke oma maka ndi oru nnochite Arabic. Yabụ na enwere ezigbo nsonaazụ nke ọrụ a ma ha na-akpata ezigbo ego ọbụladị oge ụfọdụ karịa ka ndị India na-eme na Dubai.
N'aka nke ọzọ, Filipino nwere ezigbo ahịa dị mma iji ree ngwaahịa ha. N'ihi na ha nwere ọtụtụ ndị enyi na njikọta na United Arab Emirates. Yabụ na maka Filipino dị mfe ịnweta ọtụtụ ndị otu ejikọtara ọnụ dị ka onye njem Filipino na Dubai.
Ma n'eziokwu, site na nke ahụ, ndị Philippines na-ebugharị ga-enwe nhọrọ dị mma maka mmepe n'ọdịnihu. Dịkwa ka anyị kwuru n'asụsụ Bekee ọ bụ n'ọkwa dị elu nke ukwuu bụ uru dị na Abu Dhabi. Filipino expats nwekwara ike ịrụ ọrụ na Europe ma ọ bụ United States na Canada. Ha nwere ike ire ọtụtụ ndị mmadụ na ekwentị na Filipino dị ka mba dị mma nke ukwuu ma na-ekwurịta okwu dịka ọnụọgụgụ.
Ndị na-asụ Arabic na Dubai
Ọzọ Mba nke ahụ bụ na Middle East bụ ndị na-asụ asụsụ Arabik. E nwere otu puku mmadụ bi na Egypt Syria na Saudi Arabia. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị mba ọzọ n'ezie. Ha na-abịakwa gaa Dubai maka ọrụ.
Yabụ nke a bụ mba ọzọ ewu ewu. Ha enweela ahụmịhe na Middle East Market. Iji maa atụ na Qatar Kuwait na mba Arab ole na ole. Na ha na aru oru na Dubai na Abu Dhabi. Ma ndị na-asụ Arabic nwere ọtụtụ ihe mere ha ji arụ ọrụ nhazi oru ma ọ bụ opekata mpe ọkwa onye nlekọta.
Ya mere, mee onwe gị ma mara asụsụ Arabic. Ọ ga-enyere gị aka inweta ezigbo ọrụ. Na n'ezie, ọ ga-enye gị ohere ịrụ ọrụ dị ka njikwa na ubi dị iche iche dịka ọmụmaatụ ichekwa ego na bank or ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi.
Kedu ihe mere ị ga-eji nweta ọrụ ntinye ọrụ oku?
Odi nma, oru nke ulo oru kachasi elu na gburugburu ebe a di ka odi ihe nzuzu ma oburu na ichoro na-achọ gburugburu kwesịrị ekwesị ogologo oge. Ma tinye onwe gị na ọrụ ndị ahịa dị ka ịkpọ oyi na oge ọrụ ọkwa.
Onwere ihe odi nkpa g’eme ka i nweta oru ndi ahu inye. Ihe mbu kpatara ya bu ka ihe nzuzu di ụzọ ị ga - esi nwee ọganihu na ndụ ọkachamara gị dị ka nwoke sayensị dị mkpa ma bụrụ onye a ga-akwalite n'ọkwa ọzọ ọ ga - abụ onye nlekọta ma mgbe ihe dị ka afọ atọ gasịrị ị pụrụ ọbụna kụrụ a nchịkwa larịị ohere ọrụ.
Ihe nke abuo mere ị ga - eji họrọ ọrụ a dịka ụzọ kachasị eji akpata ego ga - ekwe omume ịgbanwe ọrụ gị n'ụzọ dị nwayọ ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịtọhapụ ahụmịhe gị na ụlọ ọrụ ọzọ na enweghị ọzụzụ ọ bụla, ị nwere ike ịmalite ebe a wee bụrụ ụzọ nri ngwa ngwa.
Ihe nke atọ mere anyị ji atụ aro ka ị bụrụ apntule nka bu ego. Imirikiti ọrụ ndị ọrụ dịka ọmụmaatụ na ahịa ngwaahịa ha na-enweta ezigbo ụgwọ dị mma dabere na ahụmịhe nke ha ị nwere ike lee lee ọtụtụ ihe nkiri na TV.
Ndị na-azụ ahịa ego bụ ndị isi na-akpọ oyi?
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa Brokas na ndị na-ere ahịa nye ndị ahịa nwere ike ịme ezigbo ego na-adabere na ego ma ọ bụ ọbụna na pasent nke uru site na ngwaahịa ọ bụla. Paragraf
Yabụ ị ga - eche n’ezie ihe kpatara ị ga - anwa anwa n’ihi na n’ọnọdụ ndị kacha njọ ọ ga - ewe gị afọ ise iji ruo ọkwa Pfizer wee bụrụ onye njikwa. Yabụ ị gaghị atụfu afọ ise na mkpokọta ahụ ga-enwe ohere ọrụ dị mma yana ohere dị ogologo.
Nke a mere ụlọ ọrụ obodo Dubai na-enye ndị ahịa taa edemede a, ọ ga - enye gị ohere ịnweta ozi ndị ọzọ gbasara ụdị ọrụ na Dubai.
Nchikota maka oku oku oru na Dubai
Yabụ ee, ana m enweta ọrụ na mpaghara ịkpọ oku oyi, ọ bụ nnukwu ọrụ. Agbanyeghị, ịrụ ọrụ ụlọ ọrụ dị iche iche dịka ọrụ ndị ahịa na nyocha usoro sistem ọ ga - enyere gị aka inweta ezigbo ọrụ n'ọdịniihu. Echiche ozo di nma isonye ndi n’enwe onu ocha dika nke n’ise ihe n’ile bu n’azu lobster. Companieslọ ọrụ dịka ụlọ ọrụ oku na-akwalite ndị nlekọta na njikwa ha ngwa ngwa karịa ụlọ ọrụ ọkọlọtọ na-arụ ọrụ na Middle East Market dịka ọmụmaatụ na Dubai Abu Dhabi ma ọ bụ Doha.
Yabụ, na-ekwukarị ma ọ bụrụ na ị na-aga ma ị na-eche ịkwaga n'ụzọ kachasị mma ọ ga-abụ ịnweta onwe gị maka ndị ọrụ kachasị mma enwere ike n’inye ndị na-akpọ oku na Dubai. Zụziere onwe gị na otu esi eji edemede ahụ wee zụrụ onye na-ere ahịa dị mma n'ihi na ụdị ọrụ a ọ bụ ọrụ ọkọchị kama iresị ndị ahịa ahịa ahịa.
N'ụzọ dị otú a, ị ga-enwerịrị ọfụma ịmalite ọrụ n'ime ngalaba ụlọ akụ na-aga n'ihu ihe dị ka afọ 10 iji bulie ya n'ọkwa nchịkwa.
Ezuru na-adabere na Dubai Market
Yabụ na mmechi dabere na Ahịa Dubai, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya ịmalite na mpaghara a ma nweta ahụmịhe gị n'ihi na ụlọ ọrụ ndị a bụ ụzọ dị mma ichezọ onwe gị, ọkachasị na Middle East.
Ọrụ etiti ụlọ ọrụ yiri ọrụ siri ike ma sie ike mana n'eziokwu ilele ụdị echiche ihe kpatara, ị na - arụ ọrụ ma na - ere ngwaahịa nke ndị ahịa nwere ike ịme.
Nke ahụ ga - enyere gị aka iru ihe ịga nke ọma gị nke ọma, ị ga - amụta ntakịrị karịa gbasara usoro a n'ihi na nnukwu nzukọ buru ibu and ga - enweta njikọ hu ụlọ ọrụ anọ ị na - ekwu na ngwaahịa ahụ, ha na - eto ụlọ ọrụ, oge ọ bụla ị nwere ike ịbanye ma kpọtụrụ ha site na ị na - enye ha ọrụ gị.
Bulite na-amaliteghachi na Dubai